Ciidamada ammaanka Puntland oo dil toogasho ah ku fuliyay shan xubnood oo katirsanaa ururka Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada ammaanka Puntland oo dil toogasho ah ku fuliyay shan xubnood oo katirsanaa ururka Al-Shabaab
April 8, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
13-kii Febaraayo, 2017-ka. maxkamada ciidamada Puntland ee Boosaaso ayaa toogasho ku xukuntay xubnaha la toogtay [Xigashada Sawirka: Puntland Post]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ayaa toogasho ku fuliyay shan xubnood oo katirsanaa ururka Al-Shabaab, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamada ciidamada Puntland Cabdifataax Xaaji Aadan.
Cabdifataax ayaa warbaahinta u sheegay in toogasahada la fuliyay saakay oo Sabti ahayd.
Guddoomiyaha maxkamada ciidamada ayaa sheegay in shanta nin ay qirteen in ay ahaayeen xubno katirsan Al-Shabaab ayna ku lug lahaayeen dilal ka dhacay gudaha Puntland, oo lagu bartilmaameedsaday saraakiil katirsanaa dowladda Puntland.
Tani waa toogashadii labaad tan iyo markii sanadkii 2014-kii Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali uu xukunka yimid. Bartamihii sanadkii 2015-kii ciidamada Puntland ayaa toogtay saddex xubnood oo Al-Shabaab katirsanaa oo lagu eedeeyay qaraxyo ka dhacay magaalo xeebeedka Boosaaso.
13-kii Febaraayo ee sanadkan, maxkamada ciidamada Puntland ee Boosaaso ayaa toogasho ku xukuntay xubnaha la toogtay.